ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသ | As Many As Received Him! | Real Conversion
ဧပြီလ ( ၁၅ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“သူသည် မိမိဒေသအရပ်သို့ကြွလာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတို့သည် လူ့ကို လက်မခံဘဲနေကြ၏။ ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူတည်း ဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ထိုသားတို့မူကား၊ လူမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်၍ ဘွားသောသားမဟုတ်။ မေထုန်သံဝါသအားဖြင့် ဘွား သောသားမဟုတ်။ လူအလိုအလျောက်ဘွားသောသားမဟုတ်။ ဘု ရားသခင်ဘွားတော်မူသောသားဖြစ်သတည်း။” ( ယောဟန် ၁း ၁၁- ၁၃ )
ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့တွင် ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပဿခါပွဲတော်အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုက နိမိတ်လက္ခဏာပြသည်ကို လူများစွာက မြင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနိမိတ် လက္ခဏာကို မြင်ကြသောအခါ ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ သို့သော် သူ့ကိုတော့ မယုံကြပါ။ သူ့ကို ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်။ ပြသော နိမိတ်လက္ခဏာကိုသာ ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ ကြောင့် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခါရိစ်မက်တစ်များက သူတို့ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အမှတ်ရစေသည်။ ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် နိမိတ်လက္ခပေါ်တွင် အဓိက ထားကြသည်။ “နိမိတ်လက္ခဏာ” က ၎င်းကို ဆိုလိုသည်။ သူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကိုသာ အမြဲ ရှာဖွေနေကြသည်။ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာက လူတို့ကို မကယ်တင်နိုင်ပါ။
“သို့သော်လည်း၊ ယေရှုသည် ထိုသူတို့၌ ကိုယ်ကိုအပ်တော်မမူ။ အ ကြောင်းမူကား၊ ခပ်သိမ်းသောသူတို့ကို သိတော်မူ၏။ လူ၏အထဲ၌ ရှိသမျှကို သိတော်မူသောကြောင့်၊ လူ၏အကြောင်းကို သက်သေ ခံစေခြင်းငှါ အဘယ်သူကိုမျှ အလိုတော်မရှိ။” ( ယောဟန် ၂း ၂၄၊ ၂၅ )
ယေရှုသည် ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးသားကို မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် သူ့ကို မယုံကြည်ကြ ကြောင်းကိုလည်း သိသည်။ သူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကိုသာ ယုံကြည်ကြသည်ကိုလည်း သိသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာထဲတွင်ရှိသော ယုံကြည်ခြင်းသည် သူတို့ကို မကယ်တင်နိုင်ကြောင်း ကို သိပါသည်။ သူသည် “လူတို့” စိတ်နှလုံးကိုသိသည်။ သင့် စိတ်နှလုံးကို သိသည်။ သင်သည္ အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းကို ရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရရှိသည်ဖြစ်စေ သူသိသည်။ အသစ် သောမွေးဖွါးခြင်းမရရှိမှီ သင့်စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်ကြောင့် လုံးဝပျက်စီးပါသည်။ သမ္မာကျမ်း စာက ဤသို့ဆိုသည်။
“စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်းသောအရာထက် စဉ်းလဲတတ်၏။ အလွန် ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏။ စိတ်နှလုံးသဘောကို အဘယ်သူသိ နိုင်သနည်း…။” ( ယေရမိ ၁၇း ၉ )
ယေရှုသည် ထိုညတွင် မည်သည့်အရပ်တွင် ရှိနေခဲ့သည်ကို သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ် တို့အား မဖော်ပြပါ။ သို့ရာတွင် နိကောဒင်အမည်ရှိ ကျမ်းတတ်ပညာရှင်သည် “ညအချိန်၌ ယေရှုထံသို့လာခဲ့သည်။” ( ယောဟန် ၃း ၁၊ ၂ ) ယခုတွင် ယောဟန် ၁း ၁၁-၁၃ ကို ကြည့်ကြ ပါစို့။
“သူသည် မိမိဒေသအရပ်သို့ကြွလာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတို့ သည် လူ့ကို လက်မခံဘဲနေကြ၏။ ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူ တည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရား သခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ထိုသားတို့မူ ကား၊ လူမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်၍ ဘွားသောသားမဟုတ်။ မေထုန်သံဝါသ အားဖြင့် ဘွားသောသားမဟုတ်။ လူအလိုအလျောက်ဘွားသော သားမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ဘွားတော်မူသောသားဖြစ်သတည်း။” ( ယောဟန် ၁း ၁၁- ၁၃ )
အပြစ်သားသည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံကြသောအခါ ကယ်တင်ခြင်းရောက် လာပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သုံးခုက ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံအ ကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁ ၌၊ လူအများစုက ခရစ်တော်ကို လက်မခံကြကြောင်း မိန့်ဆိုသည်။ လူအများစုသည် ငရဲသို့ သွားရကြမည်။ ဤသို့ဆိုသည်။
“သူသည် မိမိဒေသအရပ္သို့ကြွလာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတို့ သည် လူ့ကို လက်မခံဘဲနေကြ၏။ ( ယောဟန် ၁း ၁၁ )
“မိမိလူတို့သည်” ဟူသော စကားလုံးကို ပထမဆုံးအသုံးပြုပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် မြေကြီးပေါ် ရှိလူများကို မိန့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အနေဖြင့် “မိမိလူတို့” ဟုဆိုရာတွင် ယုဒ လူများကို ဆိုလိုသည်။ သူတို့သည် ယေရှုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက် ပြုချက်များစွာကို လက်ခံရရှိကြသော်လည်း သူ့အား ၎င်းတို့၏မေရှိယနှင့်သခင်အနေဖြင့် ယုံ ကြည်လက်ခံထားခြင်းမရှိကြပါ။ ယုဒလူများများနှင့် လူသားအားလုံတို့သည် ယေဘုယျအား ဖြင့် ယေရှု ဤလောကသို့ကြွလာစဉ်ခါ လက်မခံကြပါ- ယနေ့ပင်လျှင် လက်မခံကြပါ။
“မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ …သူတပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၃ )
ပျောက်ဆုံးသောအပြစ်သားသည် ခရစ်တော်ထံသို့ရောက်လာစေရန် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ထိုအကြောင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေပြု ကျမ်းဖြစ်သည့် ယောဟန် ၁း ၁၂ သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။
“ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူ တည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသော အခွင့် ကို ပေးတော်မူ၏။” ( ယောဟန် ၁း ၁၂ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကျမ်းချက်မှာ အချက်သုံးချက်ကို ထုတ်နှုတ်နိုင်ပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်းသည် အဘယ်အရာဆိုလိုသည်ကို ဖော်ပြမည်။
“လက်ခံသည်” ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ဂရိစကားလုံးမှာ “လမ်းဗနို” ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “ရရှိရန်”၊ “လက်ခံရန်”၊ “ပိုင်ဆိုင်ရန်” ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်ကို လက်ခံရန် သင့် ကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုပါသည်။ ခရစ်တော်ကို လက်ခံရန် တောင်းဆိုပါ၏။ ယေရှုကို ပိုင်ဆိုင် ရန်၊ အားကိုးရန်၊ ကယ်တင်ရှင်နှင့်သခင်အဖြစ် ရယူရန်တောင်းဆိုပါသည်။
ခရစ်တော်ကို လက်ခံရာတွင် သင်သည် သူ့အား သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် မှတ်တမ်း တင်ထားသည်အတိုင်း လက်ခံရမည်။ ခရစ်တော်သည် ဧမာနွေလ - ငါတို့နှင့်အတူ ရှိသော ဘုရားသခင်ပေတည်း။ ဘုရားသခင်သည် လူ့ဇာတိကို ခံယူခဲ့သည်။ ခမည်းတော်၏ တပါး တည်းသောသားတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူတွင် ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသား သဏ္ဍာန်ကို ဆောင်သောသူဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား-လူ၊ ယခုအချိန်၌ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခမည်း တော်ဘုရားသခင်၏ လက်ျာဘက်တွင် ထိုင်နေသောဘုရားဖြစ်သည်။ သူသည် လူသားအနေ ဖြင့် အပျိုကညာ မာရိဝမ်း၌ မွေးဖွါးလာသည်။ သူသည် ထာဝရဘုရားသခင်- အစ သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိသောဘုရား၊ ဘုရားသခင်၏ ထာဝရသားတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာကို သင်က လက်ခံထားခြင်းမရှိလျှင် သင်လက်ခံမည့်အရာကား အဘယ်အရာနည်း။ သူသည် ကယ်တင် ရှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို သယ်ဆောင်နိုင်သောသူ၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ထာဝရကာလ ကယ်တင်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် သင်သည် သင်၏ရှင်ဘုရင်အဖြစ် လက်ခံထားခြင်းမရှိလျှင် ယေရှုကို ရရှိ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် သင့်ဘဝအသက်တာကို အုပ်စိုးရပါမည်။ သူ၌ မိမိကိုယ်ကို အရှုံး ပေးရပါမည်။ သင့်အသက်တာကို ဆက်ကပ်အပ်နှံရပါမည်။ သင့်စိတ်နှလုံးနှင့်ခန္ဒာကိုအုပ်ချုပ် ခွင့်ပေးထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် သင့်ကိုယ်သင် ဆက်ကပ်အပ်နှံရ မည်ဖြစ်သည်။ သူထံ၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး သင်၏အလိုတော်၊ အတွေးအခေါ်၊ မျှော်လင့်ချက်၊ နှင့် သင့်ဘဝတစ်လုလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် ဆက်ကပ်ရမည်။ “ကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရန် ဤသူကို မလိုလားပါ” ဟု နောက်တဖန် ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပေ။ John Cagan က “ယေရှု၌ အပ်နှံ သည်၊ ခရစ်တော်၌ ဆက်ကပ်သည်” ကို ကြားရသည်။ သို့သော် ထိုအရာက သူ့ကို စိတ်ပျက် စေပါသည်။ သူသည် “ခရစ်တော်၌ အညံ့မခံလိုပါ။” ယေရှုကို ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း မပေးလို ပါ။ သို့သော် John သည် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ “ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အ သေခံတော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်အသက်တာကို သူ့အား မပေးလိုပါ။ ထိုအတွေးက ကျွန်ုပ်ကို ကျိုးပဲ့စေပါသည်။” ထိုခဏချင်းတွင် John သည် သူ့အသက်တာကို ယေရှုအား ဆက်ကပ်အပ်နှံလိုက်သည်။ သူက “မိမိအသက်တာကို သေစေပြီး ခရစ်တော်အား အသက် တာကိုပေးလိုက်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ George Matheson ( ၁၈၄၂- ၁၉၀၆ ) က ထိုအ ကြောင်းကို ကောင်းစွာ ပြောသည်။ ၎င်း၏သံပုံသီချင်းဖြစ်သည် “အကျွန်ုပ်ကို လွတ်မြောက် စေပါ၊ သခင်” အမည်ရှိ ဓမ္မသီချင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အား လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ခြင်းရမည်၊
ကျွန်ုပ်ဓားကို ကိုင်မြှောက်ဖို့တွန်းအားပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်အောင်နိုင်လိမ့်မည်။
လောကကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲ ကျွန်ုပ်နစ်မြှုပ်၊ မိမိကိုယ်ကို ရပ်တည်သောချိန၊်
ခရစ်တော်ကို လက်ခံရရှိရန် သူ့အား သင်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်ဘုရင်အဖြစ် လက်ခံရပါ မည်။ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို အပ်နှံရမည်။ သင့်အသက်တာ၌ ဤအရာဖြစ်ပျက်ရမည်။ သူ၏ မြတ်လှသောအသွေးတော်က သင္႔အပြစ်ကို ဖယ်ရှားပြီလား။ သူ့အသွေးတော်ကို သင်သည္ ယုံကြည်ကိုးစားပြီလား။ သင့်အပြစ်ထဲက သင့်ကို ဆေးကြောပြီးပြီလား။ သင္၏ရှင်ဘုရင်အ နေဖြင့် အသက်တာ ဆက်ကပ်ပြီးပြီလား။ သူ့အား ဆုပ်ကိုင်ပြီး သင်ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်သည် ဟု မကြွေးကြော်လျှင် သင်သည် ခရစ်တော်ကို မရရှိနိုင်ပါ။ သူ့အား “လက်ခံခြင်း” သည် သူ့ အား “ယုံကြည်ခြင်း” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် ရှင်ဘုရင်အဖြစ် သူ့အား ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆာလံဆရာက ဤသို့ဆိုသည်။ “သားတော်ကို နမ်း ကြလော့။ သို့မဟုတ်လျှင် အမျက်တော်ထွက်၍၊ သင်တို့သည် လမ်း၌ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက် ကြလိမ့်မည်။… သားတော်ကို ကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။” ( ဆာလံ ၂း ၁၂ ) ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို နမ်းကြပါ။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ထံ အသက်တာ ဆက် ကပ်ကြပါ။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်၏သားတော် ကို “လက်ခံခြင်း” ဟု ဆိုလိုသတည်း။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ သားတော်ကို လက်ခံရန် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အ ကြောင်း သင်ယူကြပါသည်။
“ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူ တည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံ ကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင္႔ကို ပေးတော်မူ၏….။” ( ယောဟန် ၁း ၁၂ )
“တန်ခိုး” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် စကားလုံးမှာ “အက်ဆိုးဆီးယား” ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ Jamieson, Fausset နှင့် Brown တို့က “ဤစကားလုံးက အခွင့်အာဏာနှင့်အစွမ်းသ တ္တိ ကို ထင်ဟပ်စေသည်” ဟုဆိုကြသည်။ ဤနေရာတွင် နှစ်ခုစလုံးကို ထည့်သွင်းထားပါ သည်။” ( စာ- ၃၄၈ ) “ဘုရားသခင်၏သားများ” ဟူသောစကားကို “ဘုရားသခင်၏ကလေး များ” (NKJV) ဟု ဘာသာပြန်လျှင် ပို၍သင့်လျှော်မည်။ ခရစ်တော်ကို လက်ခံခြင်းသည် သူ၌ သင့်ယုံကြည်ခြင်းကို ထားရှိခြင်းနှင့်သူ၌ ဆက်ကပ်ခြင်းပင်တည်း။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သား မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်သနည်း။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်အသက် နှစ်နှစ်အရွယ်တွင် အဖေက ထားသွားခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူ အသက် မရှင်ခဲ့ရဘူး။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အရွယ်ရောက်လာသည့် ယောက်ျားလေးများက ကျီစယ်ကြသည။ကျွန်ုပ်ကို ဟာသလုပ်ကြသည်။ သူတို့က “ရောဘတ်မှာ အဖေမရှိတော့ဘူး” ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်က ကျွန်ုပ်နာမည်ကို “Robert L. Hymers, Jr.” ဟု စတင် သီဆိုသောအချိန်ကဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နာမည်ကို အဖေ့နာမည်အစွဲပြုပြီး ခေါ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တွင် အဖေရှိကြောင်းကို ပြသရန် အဖေ့ “နောက်တွင်” အမည်ထည့်သွင်းသည်။ ယနေ့တွင် လည်း ထိုသို့သာလုပ်ဆောင်ပါသည်။ အဖေရှိကြောင်းကို လူတိုင်းအား သိစေလိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်ကို ခမည်းတော်အနေဖြင့် ရရှိရန်မှာ ပို၍အရေးကြီးပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသော ယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ကလေးတိုင်းတွင် ၎င်းတို့အဖေအတွက် ဘုရား သခင်ကို ရရှိကြပါသည်။ ယနေ့ညတွင် ကျွန်ုပ်ဤနေရာ၌ ရပ်နေလျှင် ကျွန်ုပ်သည် အမေရိ ကန်သမ္မတ၏သားဖြစ်သည်ဟု ပြောပါက သင်တို့သည် မနာလိုဝန်တိုကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်က ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သည်ဟူ၍ပင် ပို၍ ဂုဏ်ယူစွာ ပြောဆိုနိုင်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယေရှု ကို လက်ခံသည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်အဖြစ် ကျွန်ုပ်အပေါ် အခွင့်အာဏာနှင့်တန်ခိုးကို ပေးထားပါသည်။ စကြာဝဠာကိုပိုင်သသောသူ၏သားအဖြစ် အုပ်စိုးခွင့်ကိုပေးထားပါသည်။
( “ရှင်ဘုရင့်သားတော်” Harriet E. Buell, ၁၈၃၄-၁၉၁၀ )
သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်လျှင် သင့်ကို ဘုရားသခင်က ချစ်ပါသည်။ သင် သည် ဘုရားသခင်၏သား အမှန်ဖြစ်လျှင် သင်သည် သူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ “ဘုရားသဘာ ၀နှင့်ဆက်စပ်နေသောသူဖြစ်သည်။” သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်လျှင် သင်သည် ညအ ချိန်၌ဖြစ်စေ၊ သူ့ထံသို့လာနိုင်သည်။ သူသည် သင့်ကိုကူညီ လမ်းပြရန် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပါ သည်။ John Cagan သည် အံ့ဘွယ်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူ၏အံ့ဘွယ်ဖခင်တစ်ပါးဖြစ် ခြင်းကို “ကျွန်ုပ်အဖေတွင် Ph.D. နှစ်ခုရှိသည်” ဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်အဖေအ ကြောင်းကို ပိုတောင်ပြောနိုင်သေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏မြေကြီးအဖေသည် အထက်တန်းပညာက ဘွဲတစ်ခုခုမရပါ။ သို့သော် ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘကျတော့ လောကကြီးကို အုပ်စိုးသောအ ရှင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အဘသည် အိမ်များနှင့်မြေများဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာ၊
မြေကြီးစည်းစိမ်များ လက်တော်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထား။
ပတ္တမြား၊ နှင့်စိန်များ၊ ရွှေနှင့်ငွေ ပိုင်ဆိုင်၊
ကျွန်ုပ် ရှင်ဘုရင်၏သားတော်၊ ရှင်ဘုရင်၏သားတော်။
ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ရှင် ယေရှုနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်ရှင်ဘုရင်၏သားတော်။
ကောလိပ် သို့မဟုတ် သင်တန်းကျောင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးမည့် မြေကြီးနှင့်ဆိုင်သော အဖေ ကျွန်ုပ်၌ မရှိပါ။ သို့မဟုတ် ကားအသစ်တစ်စီးဝယ်ပေးမယ့် အဖေမရှိပါ။ သို့သော် “ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုန်းစည်းစိမ်ရှိသည်နှင့်အညီ ( ကျွန်ုပ်၏ )) လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးသော” ကောင်းကင်ဘုံရှင် အဖရှိပါသည်။ ( ဖိလိ ၄း ၁၉ ) “ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော် မူသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏” ( ဖိလိ ၄း ၁၃ )) ဟု မယုံ နိုင်စရာကတိကိုပေးတော်မူသော ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ ကျွန်ုပ်၌ရှိပါသည်။ ဘုန်းတန်ခိုးအ လုံးစုံ၊ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံတို့သည် ကျွန်ုပ်ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်ကို ခွန်အားပေးသော ကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်၊ ကျွန်ုပ်ဘဝလိုအပ်ချက်တိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသော အဘအတွက်ဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းထဲတွင် ဒေါက်တာ Cagan က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ယေရှုသည် သူတို့ကို အကူအညီပေးနိုင်ကြောင်းကို လူတို့ကို ပြသရန် မိမိကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ပြီး ကြီးမားသည့်အဆီးအတားများကို အောင်မြင်လိုသည့် ခြေချော်ပျက်စီးပြီး ကျိုးပဲ့သောလူတစ်ဦးအ ကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
သူသည် အရက်သေစာမူးယစ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာ ရန်ဖြစ် တတ်သော ကွဲပြားသည့်မိသားစုတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သို့ရာ တွင် သူသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့၏အသက်တာကို ပြောင်းလဲရန် မြှင့်တင်ပေးသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ကော လိပ်ပညာကို ကျဆုံးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဒေါက်တာဘွဲ့သုံးခုရ အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး စာအုပ်ပေါင်း သုံးအုပ်ကို ရေးသားခဲ့ ပါသည်။ သူသည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွားသော သာသနာပြုဖြစ်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သို့သော် သူ သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘတွင်ရှိသောလူများ၏ခွန်အား အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
အခြားသူများက တိတ်တဆိတ်ဖြစ်နေစဉ် ဒေါက်တာ Hymers သည် အံ့ဘွယ်ကောင်းသည့် အသင်းတော်တစ်ပါးကို အ စပြုခဲ့သည်။ မတူညီသည့် လူမျိုးနွယ်စု နှစ်ဆယ်ကျော်ပါဝင်ပြီး လော့စ်အိန်ဂျယ်မြို့လယ်ခေါင်တွင် အစပြုသည်။ ထိုသာသနာက ကမ္ဘာကြီး၏အဆုံးထိအောင် ရောက်ရှိနိုင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သာသနာလုပ်ငန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအရာမှာ ဒေါက်တာ R. L. Hymers, Jr., ၏ ဘဝဇာတ် ကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကြောက်ရွံ့မှုများကိုဖယ်ရှားပြီး မဖြစ်နိုင်သောအရာကို ဖြစ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သောသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
– ဒေါက်တာ Christopher L. Cagan.
လူငယ်တို့၊ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားကြပါစို့။ ခရစ်တော်ကို လက်ခံပါ။ သူသည် သင့်အား ဘုရားသခင်၏သားနှင့်သမီးများဖြစ်လာဖို့ တန်ခိုးကို ပေးမူမည်။ အိမ်ကြီးတစ်လုံး၊ အံ့ဩစရာကောင်းသည့် အသင်းတော်သင်းအုပ်ဆရာ၊ ထူးဆန်းသည့်ဇနီး၊ သားနှစ်ယောက်၊ မြေးမနှစ်ယောက်ဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်ကို ကောင်းကြီးပေးသကဲ့သို့ သင့်ဘဝကိုလည်း ကောင်းကြီးပေးမူမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ရှင်ဘုရင်၏သားဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလျှင် သူ့အတွက် အသက်ရှင်ပါ။ သူသည် လောက ကြီးကိုအံ့ဩစေသည့် အသက်တာအားဖြင့် သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးမည်။ သင်သည်ဘည်း ရှင်ဘုရင်၏သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ဤသို့သီဆိုနိုင်သည်။
၃။	တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံသောအခါ ဘုရားသခင်ပေးသော အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းကို သင်ယူရသည်။
“ထိုသားတို့မူကား၊ လူမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်၍ ဘွားသောသားမဟုတ်။ မေ ထုန်သံဝါသအားဖြင့် ဘွားသောသားမဟုတ်။ လူအလိုအ လျောက် ဘွားသော သားမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ဘွားတော်မူသောသားဖြစ် သတည်း။” ( ယောဟန် ၁း ၁၃ )
ဤတရားဒေသနာ၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်အခြေခံတွေးတောမှုကို “တရားဟောဆရာကြီး” စပါဂျွန်ထံမှ ငှါးယူခြင်းဖြစ်သည်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြလိုပါသည်။
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသမျှသောသူတို့သည် ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရကြပါ သည်။ ဓမ္မပညာရှင်အချို့က ယုံကြည်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်း မည်သည့်အရာ စတင်ရောက်ရှိလာသည်ကို ဝေခွဲမရဖြစ်ကြသည်။ စပါဂျွန်ပြောစကားကို ကျွန်ုပ်ထောက်ခံပါ သည်။ သူက ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းတို့သည် “တပြိုင်တည်းဖြစ်ပျက်ရပါမည်” ဟုဆိုသည်။ အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းသည် အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်း၏ ဓမ္မပညာစကားလုံးဖြစ်ပါ သည်။ စပါဂျွန်က “ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လျှင်၊ ကျွန်ုပ် အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်းရှိ မရှိကို မေးရန်မလိုပါ။ အကြောင်းမှာ အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်းမရှီသူသည် သခင်ယေရှုခရစ်ကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိပါ။ အသစ်တဖန်မွေးဖွါးခြင်းခံရလျှင် သင်သည် ယေရှုကို ယုံကြည်ရပါ မည်။ အကြောင်းမှာ ထိုသို့မယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိသောသူဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်က လူတစ်ဦးသည် အပြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းရှိမရှိကို ပြသသည်” ဟု ဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်များအဖြစ် မွေးဖွါးလာကြသည်မဟုတ်။ “လူအလိုသို့” သာ မွေးဖွါးလာကြသည်။ မြေကြီးပေါ်၌ အကြီးမားဆုံးသော ခရစ်ယာန်က ကျွန်ုပ်တို့အား အသစ် မဖန်ဆင်းနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဇာတိအလိုတော်နှင့်အညီ” ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံကြသည်မ ဟုတ်။မိမိအလိုအတိုင်း မွေးဖွါးကြသည်လည်း မဟုတ်ပါ။ လူသားဆန္ဒက အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်း ကို မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်တဖန် မွေးဖွါးခြင်းကိုခံရမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲသို့ဝင်ရောက်သောစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး အသစ်သောအရာများကို ကျွန်ုပ် တို့၌ ဖန်ဆင်းပေးသည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်သည့်နေရာတွင် အသစ်သောအသက်တာရှိပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း မရှိလျှင် အသက်မရှိ။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် အသစ်တဖန် မွေးဖွါး မည်။ “လူ့အလိုအတိုင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။” ဤမေး ခွန်းကို မွေးရမည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို လက်ခံပြီလား။ လက်ခံပါပြီ သို့မဟုတ် လက်မခံ သေးပါ။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံပါပြီလား။ သူ့ကိုသာ ယုံကြည်လက်ခံပါသလား။ သင် သည် ဤသို့ပြောနိုင်ပါသလား။
သင်သည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါသလား။ သူ့ကို လက်ခံပြီလား။ ထိုသို့လက်မခံ သေးလျှင် အဘယ့်ကြောင့် လက်မခံသနည်း။ သူ့ကို လက်ခံရန် ခက်ခဲမှုများရှိပါသလား။ ငါ့ကို ယုံကြည်ပါဟူသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် အခြား သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသည် သူ့ကို ကိုးစားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ ကို ကိုးစားခြင်းသည် သူ့ကို လက်ခံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာ Cagan က “ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီလား” ဟုမေးလျှင်၊ မည်သို့ အဖြေပေးမည်နည်း။ သင်သည် သူ့ကို မမြင္ရပါ။ သူ့ကို မခံစား ရပါ။ သူ့ကိုသာ ယုံကြည်ကိုး စားရမည်။ ဒေါက်တာ Cagan က သင့်ကို လှည့်စားမည်မဟုတ်။ သင့်ကို လက်ဆင့်ကမ်းလို ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သင့်ကို နှစ်ခြင်းပေးလိုသည်။ သင့်လိုပဲ လူများလည်း နှစ်ခြင်း ခံသည်ကို မြင်တွေ့လိုသည်။ ယေရှုသည် သင့်အပြစ်၏အခကိုပေးရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အ သေခံခဲ့ပါသည်။ သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားမည်လေး။ ယေရှုက ညတိုင်း သင့်ကိုချစ်ပါသည်။ သူ့ ကို ယုံကြည်ကိုးစားမည်လော။ ယခုညတွင် အဘယ့်ကြောင့် လက်မခံသနည်း။ သင်က “ကျွန်ုပ်ကိုးစားလိုသည်” ဟုဆိုသည်။ ထို့နောက် ယခု အဘယ့်ကြောင့် လက်မခံလိုသနည်း။ ခံစားချက်ကို မရှာပါနှင့်။ ယေရှုကိုသာ ရှာဖွေပါ။ အတွေ့အကြုံကြီးကို မရှာပါနှင့်။ ယေရှုကို သာရှာဖွေပါ။ မိမိအထဲ၌ မရှာပါနှင့်။ သင့်အထဲ၌ သင့်ကို ကယ်တင်နိုင်သောအရာမရှိပါ။ မိမိအ ကြံအစည်နှင့်အတွေးအခေါ်ကို မကိုးစားပါနှင့်။ ယေရှုကိုသာ ကိုးစားပါ။ ယေရှုကို လက်ခံပါ။ ထို့နောက် သူသည်လည်း သင့်ကို လက်ခံလိမ့်မည်။
အဘယ့်ကြောင့် ခုချိန်မယုံသနည်း။ ခုချိန်မယုံသနည်း။
ကယ်တင်ရှင်ကို ယခုချိန် အဘယ့်ကြောင့် မယုံသနည်း။
မြေကြီးပေါ်မှာ လိုက်ရှာလို့ မရနိုင်ပါ၊
( “အဘယ့်ကြောင့် ခုချိန်မယုံသနည်း။” Daniel W. Whittle, ၁၈၄၀-၁၉၀၁၊ သင်းအုပ်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ )
ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားရန်မှာ ရိုးစင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ Emi Zabalaga ပြော ဆိုသောစကားဖြစ်သည့် “ကျွန်ုပ်သည် ခံစားချက်ကို ရှာဖွေနေသည်၊ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်ခြင်းကို တည်နေစေမည့် အတွေ့အကြုံအချို့ကို ရှာဖွေနေသည်… ၎င်းသည် ယေရှုကို အဆုံးမဲ့ ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် မိမိကိုယ်ကိုသွားပြီး ကယ်တင်ရှင် စောင့်မျှော်နေ ခြင်းတွင် မိမိကိုယ်ကို ပြိုလဲစေသည်” ကို နားထောင်လိုက်ပါ။ John Cagan က “စိတ်နှလုံးထဲ ၌ လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အလိုဆန္ဒမရှိပါ။ သို့သော် စိတ်ထဲတွင် ခရစ်တော်၌ ငြိမ်ချမ်းခြင်း ရှိသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ Emi နှင့် John တို့သည် ယေရှု ကို ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်။ သူတို့သည် လက်ခံကြသည်။ ထိုအချက်ပါဘဲ။ သင်သည်လည်း ယနေ့ညတွင် ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံရန် ဆုတောင်းပါသည်။ အာမင်။
“ဘုရင့်သားတော်တစ်ပါး”၊ (Harriet E. Buell, ၁၈၃၄-၁၉၁၀ ရေးစပ်သည်။)
“ထိုသူကို လက်ခံသမျှသောသူ တည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည် သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ ၏။” ( (ယောဟန် ၁း ၁၂ )
( ယော ၂း ၂၄၊ ၂၅၊ ယေရမိ ၁၇း ၉၊ ယော ၃း ၁၊ ၂၊ ၁း ၁၁-၁၃၊ ဟေရှာ ၅၃း ၃)
၁။ ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်လက်ခံခြင်းသည် အဘယ်အရာဆိုလိုသည် ကို ဖော်ပြမည်။ ဆာလံ ၂း ၁၂ ။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ သားတော်ကို လက်ခံရန် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အ ကြောင်း သင်ယူကြပါသည်။ ဖိလိ ၄း ၁၉၊ ၁၃၊ ယောဟန် ၁း ၁၁- ၁၂။
၃။ တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံသောအခါ ဘုရားသခင်ပေး သော အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းကို သင်ယူရသည်။ ယောဟန် ၁း ၁၃။